शारीरिक संरचना विश्लेषक: थप समारोह संग तल्ला तराजू को समीक्षा
तराजू - विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् शरीर संरचना सबै खेल प्रशंसक र मात्र द्वारा चासो। साँच्चै, सही शरीर को मुख्य मापदण्डहरु निर्धारण गर्न सक्ने उपकरण सबैले यसको डाटा को सत्यता विश्वास गर्न तयार छ भनेर Futuristic देखिन्छ। र सामान्य मा, कसरी शारीरिक संरचना विश्लेषक र यो परीक्षण गर्न व्यवस्थित गर्ने स्वतन्त्र प्रयोगकर्ताहरू, कि? गरेको छानबिन गरौं।
तुला विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् - यो के हो?
मात्रा - विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् शरीर संरचना पारंपरिक तराजू भन्दा बढी जटिल उपकरण हो। द्वारा र ठूलो छ, यो एकाइ आफ्नो काम dietitians प्रयोग गरिन्छ कि चिकित्सा उपकरणहरूमा भन्छिन्। तर थप हालै तिनीहरूले उपलब्ध र उपभोक्ताहरु भएका छन्।
измерить не только массу тела, но и количество костной и жировой ткани, а также объем воды, который содержится в организме. उपकरणको विशिष्टताको यो मात्र होइन वजन तर पनि हड्डी र adipose ऊतक को संख्या र शरीर मा निहित पानी राशि मापन गर्न सक्षम छ भन्ने छ। उपकरणको आधारभूत कार्य प्रदर्शन जो इलेक्ट्रोड, - बाह्य, शरीर संरचना विश्लेषक एक पारंपरिक इलेक्ट्रोनिक तराजू, तिनीहरूलाई बीच मात्र फरक जस्तो देखिन्छ।
शायद तपाईं कसरी यस्तो सानो उपकरण राम्ररी आफ्नो सम्पूर्ण शरीर हेर्न सक्नुहुन्छ आश्चर्य हुनेछ। वास्तवमा, सबै सरल छ। यस विश्लेषक को शरीर को कामकाज भौतिक को व्यवस्था आधारित छ।
ढक्कन मा वजन मानव शरीर कमजोर विद्युत दलहन मार्फत पारित गर्दै छन् जो विशेष इलेक्ट्रोड छन्। हड्डी, बोसो र पानी विभिन्न प्रतिरोध आधारित यन्त्र पूर्व-प्रोग्राम नियम आधारमा निष्कर्ष बनाउँछ। तिनीहरूले आफ्नो यन्त्र सेटिङ तुलना गर्न, गवाही निर्भर भएकोले व्यक्ति को विकास र उमेर मा डाटा प्रविष्ट गर्न आवश्यकता वजन अघि।
व्यावसायिक उपकरण संग तुलना, शरीर संरचना विश्लेषक इलेक्ट्रोनिक तराजू पर्याप्त सही डाटा देखाउँछ। तर समीक्षा गरेर न्याय, सस्ती मोडेल बोसो र हड्डी ठूलो को संकेतक हल्कासित नलिनुहोस् सक्छ।
शरीर संरचना मापदण्डहरु म किन निगरानी गर्नुपर्छ?
एक विशेष साधन खरीद गर्नु अघि, सधैं लायक त्यस्तो लागत को सम्भाव्यता विचार। विशेष गरी उच्च गुणस्तरीय शारीरिक संरचना विश्लेषक लागि पारंपरिक तल्ला तराजू तुलनामा मूल्य देखि, यो सौम्य, "खानको।" राख्न
यो साधन वजन गर्न सपना गर्नेहरूका लागि आवश्यक हुनेछ। तथ्यलाई एक लामो समय को लागि सामान्य मात्रा बन्ने फिटनेस मा संलग्न छन् जो वा dieting, धेरै मान्छे, कुनै पनि वजन गतिशीलता हेर्न नगर्नुहोस्। यो मान्छे केवल आफ्नो लक्ष्य आधा बाटो छन् कि मुख्य कारण हो।
आफै गरेर, वजन व्यायाम को समापन लागि आधार हुन सक्दैन। शरीरको वजन को नै मान कायम राख्ने गर्दा, यसको सेटिङ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। तसर्थ, मांसपेशी थप र कम बोसो हुन्छ। वजन अपरिवर्तित रहनेछ सक्छ।
शरीर संरचना विश्लेषक तराजू आफ्नो शरीर को बस आठ मापदण्डहरू प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई प्रत्येक मांसपेशिहरु मा मोटोपना वा वृद्धि मुकाबला मा एक निश्चित महत्त्व छ। शारीरिक संरचना विश्लेषक देखाउँछ:
प्रतिशत शरीर बोसो;
यी सबै मापदण्डहरू मात्र खाना र दैनिक मानव गतिविधिमा हदसम्म निर्भर छन्। निस्सन्देह, उमेर र लिङ्ग पनि वजन परिणाम प्रभावित, तर कम डिग्री गर्न। के यी मापदण्डहरू प्रत्येक गर्छ, तपाईं आफ्नो डिक्रिप्सन थप सिक्न सक्छौं।
तराजू तल्ला इलेक्ट्रोनिक विश्लेषक शरीर संरचना, वजन सूचक अलग्गै थप अर्को सेट प्रदर्शन comprises। शरीर ठूलो सूचकांक - व्यक्ति को उचाई र तौल एक अनुपात।
एक शरीर संरचना विश्लेषक आफ्नो आदर्श वजन सुझाव गर्न सक्नुहुन्छ, हासिल गर्न धेरै आंकडा छ। सबै पछि, धेरै, खातामा आफ्नो व्यक्तिगत विशेषताहरु लिएर बिना निर्देशित मात्र साधारण स्तरअनुसार लक्ष्य, सेट।
क्यालोरी को सबैभन्दा ठूलो संख्या मांसपेशी नष्ट। दैनिक जीवनमा थप आन्दोलन, अधिक आफ्नो शरीर ऊर्जा "RECHARGE।" आवश्यक तसर्थ, सँगै वजन खोने एक मांसपेशी तनाव छ। फिटनेस, एरोविक्स, नृत्य वा सरल, तर एकदम सक्रिय बिहान व्यायाम: यो केहि हुन सक्छ।
यो मानव मांसपेशीमा लागि आवश्यक प्रोटिनको राम्ररी काम गर्न, र वास्तवमा सम्पूर्ण जीव ज्ञात छ। यो दुई तरिकामा बाहिर बाट निकाले हुनुपर्छ त मानिसहरूलाई मा प्रोटिनको घरेलू आपूर्ति, अभाव हो:
यसको आफ्नै मांसपेशी तन्तु देखि।
वजन संग शारीरिक संरचना विश्लेषक सकारात्मक परिणाम, सामान्य मात्रा देखाउने, बोसो र मांसपेशिहरु जल द्वारा बाहिर एक व्यक्ति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। मांसपेशीमा को दबाव धेरै खतरनाक छ, र नै असल कुराले बोक्न छैन।
शरीर मा बोसो सामग्रीको प्रतिशत। आंत बोसो
शरीर बोसो को प्रतिशत लगभग असम्भव छ "आँखा" निर्धारण। नियम, मान्छे कि त शरीर ठूलो सूचकांक स्तर बोसो Folds को आकार, वा उत्प्रेरित छन्। तीमध्ये दुवै सूचनात्मक छैनन्।
त्यहाँ एक रूपमा यस्तो कुरा हो भन्ने तथ्यलाई "सामान्य शरीर बोसो।" यो उचित र पूर्ण कामकाज लागि आवश्यक छ जो शरीर, मा बोसो ऊतक को मात्रा हो। त्यसैले, अतिरिक्त बोसो बल्न पनि हानि गर्न सक्छ।
यो एक धेरै खतरा वहन जो आन्तरिक बोसो बारेमा उल्लेख लायक छ। आन्तरिक मानव अंगहरु यो बोसो जम्मा। अतिरिक्त आंत बोसो अन्तस्करणले, कलेजो, आदि मा एक अतिरिक्त बोझ सिर्जना र पनि हृदय प्रणाली को रोगहरु, मधुमेह र यति मा को घटना को संभावना बढ्छ। डी
तुला विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् मानव शरीर मा परिवर्तन को समग्र गतिशीलता हेर्न अनुमति दिन्छ। मांसपेशी वृद्धि गर्दा सामान्य परिवर्तन adipose ऊतक मा एक कमी बुझे। यसलाई अतिरिक्त वजन, हृदय, जोडों र मेरुदण्ड थप तनाव राख्दछ साथै गम्भीर रोगहरु को जोखिम बढ्ने सम्झना गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
लगभग बोल्ने, चयापचय को दर आफ्नो शरीर व्यायाम बिना बल्छ कति क्यालोरी देखाउँछ। यो दरमा धेरै कारक प्रभावित, तर सायद सबैभन्दा ती महत्त्वपूर्ण - बंशाणु। यसरी वजन भएको मान्छे एक उच्च चयापचय दर छ। यो आहार को शुरुवात मा वजन सधैं छिटो जान्छ भन्ने तथ्यलाई बताउँछन्।
एक व्यक्ति दैनिक उपभोग गर्न सक्छन् क्यालोरी संख्या, एक शरीर संरचना विश्लेषक देखाउँछ। Tanita - यो अद्भुत उपकरण को सबै भन्दा प्रसिद्ध ब्रान्डहरु को एक, जो एक व्यक्ति ताप आवश्यकता गणना गर्न एक उच्च सही डाटा प्रर्दशन गर्दछ।
मानव शरीर मा निहित छ धेरै पानी कसरी प्रश्न मा, धेरै तुरुन्तै प्रतिक्रिया थियो - 80%। वास्तवमा यो छैन। Indicative मान 55-60% छन्। पुरुष र महिला लागि नै समय दर मा अलि फरक छन्।
यसलाई सफा पिउने पानी संग आफ्नो शरीर आपूर्ति गर्न अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। आखिर, यो स्वास्थ्य, युवा र मुड को आफ्नो राज्य मा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, 1.5-2 लिटर पानी खपत को दैनिक दर। यो एक मिथक छैन।
हड्डी ठूलो वजन कम मा एक प्रमुख सूचक छैन, तर अझै पनि यो विचार लायक छ। मानिसहरूलाई को आहार मा क्याल्सियम को स्तर प्रभावित हड्डी ऊतक को बल र वजन। हड्डी ठूलो को आफ्नो कमी संग कमी हुन सक्छ। यो विकल्प गम्भीर खेल संलग्न छन् जो मान्छे को लागि थप उपयुक्त छ। शरीरमा तनाव प्रबलित यदि हड्डी कमी पछि घाइते गर्न सक्छ।
चयापचय उमेर आत्म-सुधार को लागि एक जोडा प्रोत्साहन छ। कि आफ्नो शरीर 40 वर्ष छ, सही उमेर 20-25 वर्ष मा महसुस गर्न अप्रिय? तराजू - Tanita शरीर संरचना विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् तपाईं आधारमा सबै आवश्यक मापदण्डहरू जो एक व्यक्ति को चयापचय उमेर बारेमा जानकारी सकिन्छ थाहा दिनुहोस्। आदर्श चयापचय उमेर वास्तविक भन्दा कम वा बराबर हुनुपर्छ।
शारीरिक संरचना विश्लेषक: समीक्षा
दुर्भाग्यवश, शरीर संरचना विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् छैन माल उपभोक्ताहरु "चलिरहेको" छन्। तसर्थ, हामी उपकरण को सबै भन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड को उत्पादन समीक्षा विचार गर्नुहोस्। यसलाई "Tanita" मात्रा।
शरीर संरचना (खैर, त्यो जापान एक मूल छ) को विश्लेषक निर्माता नेट मा पोस्ट सकारात्मक समीक्षा धेरै छ। घर मा आत्म-वजन - अक्सर यो नै उद्देश्य संग प्राप्त छ। तराजू - Tanita वजन विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् एकदम एक पोषणविद् र फिटनेस प्रशिक्षक को सेवाहरूमा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। उचित पोषण र पुष्ट अभ्यास आज बारेमा सबै जानकारी सार्वजनिक डोमेनमा इन्टरनेटमा छ, र वजन विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् मात्र तपाईं शरीर मा परिवर्तन निगरानी गर्न अनुमति दिन्छ। यो उपकरणको सकारात्मक पक्षहरू बाट छुट्टयाएर गर्न सकिन्छ:
केही मोडेल विश्लेषककालागिक्लिकगर्नुहोस् वजन तपाईं धेरै प्रयोगकर्ताका लागि मापन सूचना भण्डारण गर्न अनुमति, त्यसैले एउटा फाइदा, तपाईं पनि थप्न र व्यावहारिकता गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले यो शरीर को मापदण्डहरु निगरानी गर्न सम्भव बनाउन देखि सिर्फ एक व्यक्ति, तर सारा परिवार छैन।
अन्तमा, तपाईं मह सानो ड्रप टार को बैरल पतला गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई को लिङ्कमा आउनेछ भनेर ठ्याम्मै कुराहरू, अवस्थित छैन। र यो एक तथ्य छ। सबै को पहिलो, धेरै प्रयोगकर्ताहरू जो 17 000 पुग्न सक्दैन यो उपकरणको मूल्य, गनगन। यो गर्भवती महिला र एक pacemaker लगाउन भएका मानिसहरूले प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्न आवश्यक पनि छ। न्यूनतम रकम संग शेष-विश्लेषक को सस्ता मोडेल डाटा कार्यहरु विकृत हुनेछ। यो adversely किनभने प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रगति को असली तस्बिर थाहा छैन, प्रशिक्षण को परिणाम असर गर्न सक्छ।
संक्षेप, हामी शरीर संरचना विश्लेषक तराजू, को पाठ्यक्रम, छैन प्रधानमन्त्री आवश्यकता को उत्पादन हो भनेर याद गर्न सक्नुहुन्छ, तर तैपनि तिनीहरूले अतिरिक्त वजन विरुद्ध लडाई मा एक विश्वसनीय सहयोगी हुन सक्छ। त्यसैले, तपाईं आफ्नो क्षमता मा विश्वास गर्दै छन् भने, शरीर संरचना विश्लेषक - पैसा को एक उचित खर्च। को dietitian, व्यक्तिगत फिटनेस प्रशिक्षक र जिम गर्न सेवाहरूको लागत दिइएको, को विश्लेषक वजन नराम्ररी आफ्नो पैसा सुरक्षित गर्न। यसबाहेक, कारण परिश्रम संग, तिनीहरूले यो तपाईं को लागि एक पेशेवर वजन मामिलामा गर्नेछ। यस मामला मा, स्वतन्त्र काम साथै काम विशेषज्ञहरु संग को परिणाम, तपाईं निश्चित निराश छैन।
छोराछोरीको विकास चटाई - यो कोक्रो विश्वको बुझ्न
Carriages Navington - सबै भन्दा राम्रो विकल्प आमाबाबुको लागि
एक खाट लागि सही गद्दा कसरी चयन गर्ने?
टिभी सैमसंग UE40H7000AT: समीक्षा, निर्देशन
मूल डिजाइनर समाधान - गिलास प्रवेश ढोका
एक सुन्दर घाम कसरी चयन गर्न
Fluconazole: प्रयोगको लागि निर्देशन
लाभ herculean porridge
तयारी "बोटुल्याक्स": क्लाइन्ट्स र कस्मेटोजिस्टहरूको समीक्षा
सामान्य एनेस्थेसिया अन्तर्गत दन्त सर्जरी
मस्तिष्क आघात लक्षण, जो ध्यान गर्नुपर्छ
हाम्रो शरीर को दर्पण जिब्रोको पहेँलो पैच वा सामान्य फिर्ता ल्याउन
पातलो कमर र पाठ Pygmalion कसरी बनाउने
Chthonic हरर - प्रकृति को सेना को डर छ
"रोजा Khutor": आफैलाई हेर्न के?
Rechargeable ड्रिल Makita 6261DWPE: वर्णन, विनिर्देशों, समीक्षा
रेडियोबिना कसरी चयन गर्न अर्थ: सुझाव र समीक्षा